Nwee ngalaba gị! | Martech Zone
Nwee ngalaba gị!
Mọnde, Jenụwarị 8, 2007 Tuesday, April 5, 2016 Douglas Karr
Otu n'ime ihe ohuru nke Blogger bụ na ị nwere ike ịnabata ngwa ahụ na ngalaba gị. (Achọpụtara m na ha na-enye iji nbanye akaụntụ Google gị n'elu ikpo okwu ọhụrụ, nke ahụ dịkwa mma). WordPress enyefela iji kwado blọgụ gị, hazie isiokwu gị, tinye mgbakwunye, wdg ruo nwa oge ugbu a. Ekwenyere m na ọ bụ otu n'ime isi ihe mere m ji họrọ WordPress… Achọrọ m ịnwe ngalaba m.
Nsogbu site na ịmalite blọgụ gị ma na-agba ya na otu n'ime ọtụtụ nyiwe, vox, bọọdụ, blogger, ma ọ bụ wordpress, bụ na ha nwere okporo ụzọ gị, ọ bụghị gị. Are na-adabere n'elu sava ha, ha n'elu ikpo okwu na-agbanwe agbanwe, ha downtime, ihe niile! Naanị ihe ị 'nwe' bụ olu gị.
Nke ahụ abụghị nnukwu nsogbu ma ọ bụrụ na ịchọrọ idebe akwụkwọ akụkọ n'ebe ahụ. Mana igbanwe uche gị n'okporo ụzọ na ikpebi na ịchọrọ ịdị oke egwu banyere ịde blọgụ, ikekwe nweta ụfọdụ mgbasa ozi, wdg, ma maa gịnị? Na-arapara… niile isi search maqbx chekwebe ugbu a nwere olu gị (ọdịnaya) edepụtara na onye ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ. Nke ahụ pụtara na ha nwere okporo ụzọ, ọ bụghị gị.
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ha arịgoro n’elu afọ? Gịnị ma ọ bụrụ na ihe nkesa ha ma ọ bụ ngwanrọ na-enweta egwu dị egwu na ịchọrọ ịhapụ ha. Ọ dabara nke ọma, ịnwere ike iji post gị were mana, ọ dị nwute, ịnweghị ike iwepụta nyocha ọchụchọ gị. Nke ahụ nwere ike ịtọgbọ gị n’azụ izu na ọnwa ka ị na-eche ka onye ọ bụla depụta saịtị gị ma melite amaokwu ha niile na saịtị gị. Na ngwụcha izu a, m kwagara saịtị m na akaụntụ dị iche, njikọ m niile na nsonaazụ ọchụchọ m na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dịka ha mere na mbụ. M ga-atụ aro itinye n'ọrụ njikọ njikọ na-adịgide adịgide nke mere na ọ bụrụ na ị gafere na ikpo okwu ọzọ, ị nwere ike ịchekwa njikọ njikọ gị.
Ndụmọdụ m nye ndị na - ede blọgụ ọhụrụ?
Nwee ngalaba blog gị! Ekwekwala ka 'techy' debanye aha ya maka gị. Ikwesiri inwe nke ya, ikwesiri imeghari ya, ikwesiri idebe ya. Inwe ngalaba dị ka ịnweta adreesị n'okporo ámá gị, ị ga-etinye ala ahụ na aha onye ọzọ? Kedu ihe ị ga - eji azụmaahịa gị ma ọ bụ blog gị mee ya?
Ndụmọdụ m maka nyiwe ntanetị?
Nye ọrụ ihe nkesa aha. Nke a ga - enyere m aka ịdebanye aha ngalaba na onye na - edebanye aha m kachasị amasị m, mana tọọ aha ihe nkesa aha m na saịtị gị. Ọ bụrụ na m kpebie ịkwaga blọgụ m ma ọ bụ saịtị m gaa na ndị ọbịa dị iche, enwere m ike ịmegharị saịtị m ma melite sava aha m. Nke a nwere ike ịbụ 'ịkwụ ụgwọ maka ojiji' ọ bụla. M ga-ezere ọrụ ndebanye aha ngalaba ebe ọ bụ na ha nwere ike ịbụ ihe mgbu na butt na ị ga-agbakwunye ụdị nkwado na mwekota na saịtị gị. Ma inwe ihe nkesa na ngalaba aha na-ezo http://mydomain.com ka http://mydomain.theirdomain.com dị nnọọ mfe.
Tags: domainngalaba ahanwee ngalaba aha gị
WordPress: Ndabere ma weghachite na Server ọzọ
Direct Direct na-arụ ọrụ!
Jan 9, 2007 na 8: 59 AM
Ekwenyere m kpamkpam, Douglas. Kedu ihe kpatara iji nyefee njikwa nke ọdịnaya ahụ ị kee onye ozo?
Echetara m mgbe m ga-akwụ $ 72 maka ngalaba izizi m, mana ụbọchị ndị a abụghị ihe kpatara ịghara ị nweta ngalaba nke gị. Ma a ka nwere ọtụtụ aha okike. (Ma ndị ahụ na-esite n'aka otu elekere ehihie-nyocha…).
On a dị nnọọ iche dee, ebe ị banyere a azụmahịa nlereanya n'ihi na ịde blọgụ ikpo okwu na enye; M na-eche mgbe niile: kedu ka WordPress si enweta ego? Ọ bụ naanị onyinye, nke ahụ ọ na-arụ ọrụ n'ezie?
O juru m anya na onye nwe wikipedia jụrụ ịnwe ọkọlọtọ mgbasa ozi na saịtị ha. Nkwanye ugwu!
Jenụwarị 9, 2007 na 2:01 PM
Enweela m nsogbu nke ịbịaghị n'oge ịnweta ngalaba aha. Ihe mere m ji zụta ngalaba aha m bụ n'ihi na achọrọ m ịnwale karịa. Otú ọ dị, enwere m mmetụta mgbu nke imegharị.
Jan 14, 2007 na 11: 30 AM
Enwere ihe dị egwu biputere na Shards of Conscious na usoro iji mee ka WordPress gị gaa na nke ya!
Jan 15, 2007 na 11: 59 AM
Daalụ maka ịzo aka na post m, Doug. Ọ nyere m afọ ojuju.
Enwere m nkwekọrịta zuru oke maka ịnwe ngalaba nke gị ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ na ọ bụghị site na mmalite nke ịde blọgụ. Na-emepe ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka onwe gị. Ihe na-eto eto. May nwere ike ịmalite ịnwale naanị iji hụ ma ọ masịrị gị, yabụ jiri nyiwe onye ọzọ. Mana ọ bụrụ n’ịchọpụta na ị masịrị ya ma chọọ nnwere onwe ọzọ, ị kpọtara onwe gị ọtụtụ ọrụ na ihe ndị ọzọ ị kwuru maka ya.